ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ ကတ်ကြေးဖြင့်ဆံပင်ဖြတ်ရန်လမ်းညွှန် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 8
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများကိုအိမ်သုံးသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် "ဆံပင်ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးဘယ်လိုသုံးရလဲ" ကဲ့သို့အဖြေမပေးချေ။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးတစ်စုံ ၀ ယ်သောအခါ၎င်းတို့ကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုသိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အိမ်မှာ (သို့) အလှပြင်ဆိုင်မှာဆံပင်ဖြတ်တောက်စက်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာသင်ယူရာမှာဒီအဆင့်လေးဆင့်ပါဝင်ပါတယ်။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးတွင်၎င်းတို့ကိုကြာရှည်စွာသုံးရန်လွယ်ကူစေသော ergonomic လက်ကိုင်များရှိသည်။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဆွဲ၊ မဆွဲပါနှင့် သင်၏ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်.
အကယ်၍ သင်သည်သင့်အိမ်၌ဆံပင်ညှပ်ရန်ပုံမှန်ကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ဆံပင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးဆံပင်ပျက်စီးနိုင်သည်။ အနည်းငယ်သာဆေးကြောပြီးနောက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဤကတ်ကြေးများကိုဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး၊ ဆံပင်ညှပ်စက် (သို့) ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဆံပင်ဖြတ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်နှင့်ဆံပင်ကျန်းမာရေးကိုသေချာစေရန်ဆံပင်ဖြတ်ရန်ကတ်ကြေးကိုသုံးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာများနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆရာများသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာကြီးများကိုမှီခိုနေမည့်အစားကိုယ်ပိုင်ကတ်ကြေးနှင့်အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းလေ့ရှိကြသည်။ အချို့လူများသည်သူတို့၏ကတ်ကြေးနှင့်အလွန်တွယ်ကပ်လာသည်။
ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး၏အဓိကလက္ခဏာများ ဆံပင်များကိုသပ်ရပ်စွာဖြတ်ရန်ကတ်ကြေးသည်ချွန်ထက်ရမည်။ သူတို့၏ဆံပင်ကြီးထွားရန်ဆန္ဒရှိသူများအတွက်သန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းသည်သင်၏ဆံပင်စွန်းများကိုသပ်ရပ်စွာထိန်းထားလိမ့်မည်။
မင်းဆံပင်ကိုကတ်ကြေးနဲ့ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေလား။ မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့သော့ခလောက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမင်းသိချင်သလား။ သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။
ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကိုဇူလိုင်လတွင်ဖွင့်ခဲ့သော်လည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည်၎င်းတို့၏ဆံပင်ကိုကတ်ကြေး (သို့) ညှပ်ဖြင့်မည်သို့ဖြတ်ရမည်ကိုစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။
"မင်းဆံပင်ကိုစိတ်ရှည်ရှည်မထားပါနဲ့၊ ငါဆံပင်ညှပ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းဖောက်သည်တွေကသူတို့ဆံပင်တွေမှားတာငါတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ မင်းဆံပင်ညှပ်တာဒါမှမဟုတ်အစွန်းတွေကိုဖြတ်တာကအရေးမကြီးဘူး။ ဒါကိုလျှော့ဖို့စောင့်ပြီးမှမင်းရဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လူတိုင်းသည် lockdown ကိုစောင့်ရန်မတတ်နိုင်ပါ။
အရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နေ့စဉ်အိမ်သုံး DIY အမှတ်တံဆိပ်များအပါအ ၀ င်ဆံပင်ဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးကိုတွေ့နိုင်သည် www.JapanScissors.com.au
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုလိမ့်မည်။
သင်၏ pinky ကို Tang တွင်ထားပါ။ ဤသည်လက်ကိုင်အထက်ထွက်ကပ်သောချိတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ဆံပင်ကိုဖြတ်ရန်သင်၏ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ!
ဆံပင်ကိုဖြန်း။ ရေဖြန်း။ ရေစိုစေမည်။
ဆံပင်ကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်းကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောနည်းစနစ်နှစ်ခုဖြစ်သည် Point ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ဖြီးကျော်
အဆိုပါ Point ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းစနစ်သည်ဆံပင်ကိုစိုစွတ်စေရန်ဖြန်းပြီးဖြောင့်ဖြီးပါ၊ ဆံပင်ဖြတ်တောက်ရန်ကတ်ကြေးကို သုံး၍ ညွှန်ပါ။
Point Cutting ကိုဘာကြောင့်လူကြိုက်များစေတာလဲ။ ဤနည်းကိုဆံပင်ကိုအတိုရိတ်ရန်နှင့်အရှည်ကိုမဖြတ်ရန်နှင့်ဖြတ်ရန်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ ဖြီးကျော် နည်းစနစ်သည်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ဆံပင်ကတ်ကြေးအသုံးပြုရန်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်ဆံပင်ပုံစံတိုများအပေါ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
Over Comb ဆံပင်ညှပ်နည်း၏အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သင့်တွင်ကတ်ကြေးရှည်တစ်ချောင်းရှိလျှင်သင်၏လက်ချောင်းများကိုအပေါ်မှဖြတ်မည့်အစားခေါင်းဖြီးဖြင့်ဆံပင်ဖြတ်လိုလျှင် Over Comb ဆံပင်ညှပ်နည်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ Non-do အတွက်ဖြီးကိုသုံးပါminaသင်ဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဆံပင်များကျန်ရှိနေသေးသောနေရာများသို့သွားပါ။
ဆံပင်ရှည်ညှပ်ကတ်ကြေးသည် Over Comb နည်းစနစ်ဖြင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပြီးဆံပင်အတုံးကြီးများကိုလည်းဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အချက် ၁၁ ချက်
ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်းသည်အစဉ်အဆက်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်ဤနေရာတွင်ဖြတ်တောက်နေစဉ်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးရှင်းသောအကြံပြုချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များစွာရှိသည်။
၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်တိုင်းသည်သင်၏ဆံပင်ကိုစဖြတ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်နေတယ်ဆိုရင်ဆံပင်ပုံစံအသစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ကတ်ကြေးမသုံးပါနဲ့။
ဆံပင်ပြန်ပေါက်ရန်သင်ကတ်ကြေးမ သုံး၍ သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်လျော့နည်းအောင်အမြဲတမ်းဖြတ်တောက်ပါ။
သင့်ရဲ့ Bangs (မြိတ်) ကိုချုံ့တဲ့အခါ, ပျော့ကြည့်ရှုရန်မျက်နှာကျက်ဆီသို့ကတ်ကြေးထောင့်။
သင်သည်ဆံပင်ရှည်ကိုဖြတ်မည်ဆိုလျှင်သင့်ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကတ်ကြေးကို သုံး၍ ပခုံးတစ်ဖက်စီကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။
ဆံပင်သုံးရန်ရေပန်းအစားဆုံးနည်းလမ်း ဖြတ်တောက်ခြင်း ကတ်ကြေးသည်ပျက်စီးနေသောအစွန်းများ (ခွဲစွန်း) ကိုဖြတ်ရန်နှင့်ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပျက်စီးသွားသောနေရာ၏အစွန်အဖျားနားရှိအမြဲဖြတ်ပါ။
မင်းဆံပင်ကိုသုံးနိုင်တယ် ဖြတ်တောက်ခြင်း အိမ်တွင်ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကတ်ကြေးကတ်ကြေးများနှင့်ဆံပင်ကို ဖြတ်၍ ပိုလျှံသောဆံပင်အရှည်ကို ဖြတ်၍ ဖြီးပါ။
အမှားအချို့အတွက်ခွင့်ပြုပါ - အမှားသေးသေးလေးများသည်မင်းဆံပင်ပုံစံကိုသာပေးသည်
ဆံပင်ညှပ်ရန်အစီအစဉ်မရှိခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဆံပင်ကိုဖြတ်သောအခါအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ "မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ဆံပင် ၃ လက်မကိုလိုချင်တယ်၊ အမှားအတွက်အနားသတ်မရှိတဲ့မျဉ်းဖြောင့် ၃ လက်မကိုဖြတ်လိုက်တာကိုငါမြင်တဲ့အခါငါတုန်လှုပ်မိတယ်။ မင်းအမြဲလုပ်နိုင်တယ်။ ပိုချုံ့ဒါပေမယ့်မင်းပိုဝတ်လို့မရဘူး။
ဤဆောင်းပါးရှိ link အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကော်မရှင်တစ်ခုရစေနိုင်သည်။
ဇူလိုင်လတွင်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်သည်ဆိုသော်လည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည်၎င်းတို့၏ဆံပင်ကိုကတ်ကြေး (သို့) ညှပ်ဖြင့်မည်သို့ဖြတ်ရမည်ကိုစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်မဆံပင်ညှပ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းဖောက်သည်တွေကသူတို့ဆံပင်တွေမှားတာငါတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ မင်းဆံပင်ညှပ်တာဒါမှမဟုတ်အစွန်းတွေကိုဖြတ်တာကအရေးမကြီးပါဘူး။ ဤအရာကိုလျှော့ရန်သင်စောင့်နိုင်ပြီးသင်၏အလှပြင်ဆိုင်သို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လာနိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ YouTube ဗီဒီယိုကဘာလဲ
ဆံပင်ညှပ်နည်းအကြောင်းအွန်လိုင်းမှာဆံပင်ညှပ်နည်းသင်တန်းတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်။ Bebexo ပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ၊ ဖြည်းဖြည်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလတ်ပါသောအရာကိုရှာရန်သင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စျေး ၀ ယ်အကြံပေးပါ။
"သော့ချက်ကမင်းဆံပင်ညှပ်တွေကိုဖြတ်ဖို့ယောက်ျားရဲ့ဆံပင်ညှပ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသမီးတွေကိုဆံပင်ညှပ်ဖို့ဆွဲတဲ့အခါမင်းရဲ့လက်တွေဘယ်လောက်တင်းသလဲ၊ အသေးစိတ်ကအဓိက"
ဆံပင်ညှပ်ရန်အစီအစဉ်မရှိခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ယောက်ဆံပင်ညှပ်သည့်အခါအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ဆံပင် ၃ လက်မကိုလိုချင်တယ်၊ အမှားမပါတဲ့ ၃ လက်မမှာမျဉ်းဖြောင့်ဖြတ်တာကိုငါမြင်တဲ့အခါငါပိုတုန်လှုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းပိုချလို့မရဘူး။
ရှေ့ဆုံးမှစတင်ခြင်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနယ်မြေဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖောက်သည်အများစုမြင်နိုင်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ခြေကိုစမ်းသပ်ရန်နောက်ကျောမှစတင်ပါ။ ထို့နောက်ကျွမ်းကျင်သူများညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဖြည်းဖြည်းနှင့်နည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ [အပျော်တမ်းဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ် ဦး မဟုတ်ဘဲအပျော်တမ်းနောက်လိုက်များရရှိရန်ကျွမ်းကျင်သောဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ် ဦး ကိုရှာပါ။ "
၂၀၂၀ မှစ၍ ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကို သုံး၍ သူတို့၏ဆံပင်ပုံစံများကိုထိန်းသိမ်းနည်းကိုလေ့လာသင်ယူသူပိုများလာသည်။
ဆံပင်ကတ်ကြေးသုံးခြင်း၏အဓိကကဏ္ three သုံးရပ်မှာ -
သင်ပိုမိုယုံကြည်မှု ရှိ၍ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ဆံပင်ကိုဖြတ်လိုလျှင် Point Cutting နှင့် Over Comb နည်းစနစ်များသည်အသုံးအများဆုံးနည်းများဖြစ်သည်။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့သင့်တော်တဲ့ကိရိယာတွေလိုတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်သည်ကတ်ကြေးအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအစပြုသူများအတွက်စိတ်ရှုပ်စေနိုင်သည်။ ဆံပင်ညှပ်အတွက်မည်သည့်ကတ်ကြေးအမျိုးအစားလိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
မင်းဆံပင်စတိုင်အတွက်ဖြစ်ဖြစ်မင်းအိမ်မှာ DIY ညှပ်ဖို့ဘယ်ဟာကပိုသင့်တော်လဲ။
ဆံပင်ညှပ်ညှပ်သည်မည်သည့်အလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၌မဆိုတွေ့နိုင်သောအသုံးအများဆုံးနှင့်အခြေခံ tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီညှပ်တစ်စုံကိုဆံပင်ပုံစံချရန်သုံးသည်။ အလှပြင်ဆိုင်ရှိအခြားအရာများကိုဖြတ်ရန်၎င်းကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ကတ်ကြေးတစ်စုံသည် DIY stylists များအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ အလွန်ဂရုတစိုက်။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအခြားသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆံပင်ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတာငါမြင်ဖူးတယ်၊ ရလဒ်ကမင်းဆံပင်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ဘာကြောင့်ပေးတာလဲဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုသင်ခန်းစာဘဲ။ အရမ်းရယ်ရတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆံပင်ညှပ်တဲ့သူအရေအတွက်ကိုငါအမြဲအံ့တယ်။ အချို့ကကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေစဉ်အခြားသူများ ... ကောင်းသည်၊ အခြားသူများသည်ကြောက်စရာကောင်းသောအလုပ်ကို လုပ်၍ ဤအရာကိုဖတ်လျှင်သူတို့သည်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ဖူးသလားဟုငါတွေးမိသည်။ ဆံပင်ကတ်ကြေးကောင်းကောင်းတစ်စုံကအထောက်အကူပြုသော်လည်းအခြေခံအနည်းငယ်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုသည်။